Tranom-barikan’i Dhaka · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 25 Jolay 2018 4:13 GMT
(lahatsoratra teny anglisy nivoaka tamin'ny mey 2008)
Fandriho ao amin'ny Rising Voices Videos ao amin'ny iTunes
Nitombo ho tanàna maresaka ahitana mponina tokony ho 11 tapitrisa eo ho eo, ao anatin'ny velarantany 816 km toradroa, i Dhaka, amin'ny maha-renivohitr'i Bangladesh azy. Toetany mafana tahaka ny ao Bangladesh manontolo no misy ao; mafana sy mibaliaka ny masoandro amin'ny ankapobeny mandritra ny taona. Maro amin'ny olona no tonga ao Dhaka hitady asa sy hanao izay hivelomana. Faritra iray ankilan'ny lalamby Malimagh no nanorenan'ny mpibodo tany ny ambany tanàna. Vita amin'ny bararata novelarina sy tafo vifotsy ary gorodona maloto ny ankamaroan'ny trano. Io ny dobo tokana manome rano ho an'ny fianakaviana 100 mahery. Mampiasa io fatsakana io handroana, hisotroana rano, sy hanaovan-javatra hafa ny olona rehetra amin'ity faritra ity.
Maloto dia maloto ny tontolo iainana amin'ity ambany tanàna ity. Maloto ny rano ao ary tsy mahasalama ny fomba fidiovana.
- Iza ny anaranao?
– Maninona ianao no tonga eto Dhaka?
– Tonga eto Dhaka aho noho ny fahantrana.
– Inona ny asanao izao?
Olona maro no miaina eto. Maro amin'ny lehilahy no miasa any am-pivarotana, ny sasany mpitarika posy, ny sasany mpiasa isan'andro, ny sasany mpivaro-mandeha, sns. Miasa ivelan'ny trano ihany koa ny vehivavy hahazoana vola ho an'ny fianakaviany. ny sasany amin'ireo mpiasa an-trano, ny sasany mpiasa isan'andros, mpivaro-mandeha, mpivarotra mofomamy an-dalambe, sns. Maro amin'ireo mangataka hiainany na vola tombony.
- Aiza ianao no monina?
– Any ambany tanàna.
– Aiza no misy ny distrikan'ny tranonao?
– Khulna. mpitam-barotra aho.
Maro amin'ireo olona ambany tanàna no tsy mahay mamaky teny sy manoratra. Tsy mankany an-tsekoly ny ankamaroan'ny ankizy. Milalao [mandritra ny andro ny ankizy] satria tsy mankany an-tsekoly. Mianjady amin'ny mponina ambany tanàna na hanoanana, tsy fanjarian-tsakafo, ary ireo karazan'aretina.